China onwe brewed ọhụrụ biya akụrụngwa akụrụngwa na ndị nrụpụta | JUMP
A breụ biya biya na-ezo aka biya biya nke onwe ya site na iji ngwa ọrụ biya. A na-akpọ ya biya biya n'ihi na ọ bụ aka aka ka ọ na-eme ya karịa site na mmepụta nnukwu ụlọ ọrụ. Nmepụta ya dị iche na nke ụfọdụ ụlọ ọrụ biya buru ibu mepụtara. Na Germany, iwu biya biya doro anya nke ọma kwupụtara akụrụngwa eji eme biya biya nwere ike ịbụ:
Mpempe biya biya nke onwe bụ ụdị biya biya dị elu, nke a na-erekarị na ụfọdụ ụlọ oriri na nkwari akụ dị elu.
Site na akụrụngwa biya anyị, anyị nwere ọrụ maka ịnye gị nkwado teknụzụ maka gị, yana ụfọdụ akụrụngwa dị mkpa na usoro ịme biya (n'ezie, ị nwekwara ike ịzụta akụrụngwa n'onwe gị).
Usoro ịgba ụka bụ ọkachasị gbaa ụka. Oge gbaa ụka bụ ihe dị ka ụbọchị 10 -21 ụbọchị, ụfọdụ German biya manor beer manation gbaa oge bụ ụbọchị 28, nke mere na biya jiri nwayọ gbaa ụka na steeti ọnọdụ ala dị ala, uto ahụ dị nro karị, isi na-esiwanye ike, ụfụfụ ka baa ọgaranya.
A breụ biya biya biya bụ ụdị biya dị elu, nke a na-erekarị na ụfọdụ họtel kpakpando dị elu.
Akụrụngwa akụrụngwa nke ejiri biya mee biya ọhụrụ
Ngwongwo ihe ọ beerụ Germanụ biya biya nke German nke nwere usoro ndị a:
1. Malt ndinuak usoro
2. Sacrament, esi na nzacha usoro
3. Usoro gbaa ụka
4. Usoro nchịkwa okpomọkụ
5. Igwe friji
6. CIP na sistemu nhicha akpaaka
A na-eji ọla kọpa na igwe anaghị edozi ihe eji eme biya biya nke German. Red ọla kọpa nke saccharification ite bụ ihe ochie na mara. Akụrụngwa ahụ nakweere ọnọdụ ọkụ ọkụ eletrik, nke dị mfe ịrụ ọrụ, enweghị mkpọtụ na enweghị mmetọ. Companylọ ọrụ anyị nwekwara ike ịhazi akụrụngwa biya dịka ọnọdụ nke ụlọ nkwari akụ ọ bụla si dị, nke mere na ihe biya biya na-aghọ ngwaike iji melite ọkwa ụlọ nkwari akụ. Kinddị mmanya mmanya na ebe a na-ere mmanya na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ wineụ esiwanyela na ndụ obodo ukwu.
Inwe ụlọ biya biya na họtel nwere otu ihe jikọrọ ụlọ ebe a na-eme biya. O nweghi ike iweputa biya ohuru ohuru na udu mmiri na biya na-ekpo ọkụ n'oge oyi, kamakwa inye nlekọta ahụike nlekọta ahụike dị iche iche na nri dị iche iche maka ndị ahịa dị iche iche, dịka biya biya, biya ojii, mmanya na-acha ọbara ọbara, spirulina green beer na mkpụrụ osisi dị iche iche ekpomeekpo ọhụrụ biya maka ụmụ nwanyị. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị ịmịpụta biya na saịtị ahụ, kamakwa mee ka ndị ahịa nwee ọmarịcha amara nke ịmịpụta biya dị mma ma na-eri ọrịị elu.
A ofụ biya biya nke akụrụngwa biya biya nke German - biya ọka bali, biya rye, biya nke spirulina, biya balsam pear na mmanya dị ụtọ - aghọwo ọkacha mmasị nke ahịa ị beerụ biya. Akụrụngwa nke biya biya bụ Australian malt, Czech top hops na German yist ọhụrụ, na-agbakwunyeghị ihe enyemaka ọ bụla, dị ka osikapa, na ilekwasị anya na iwusi ahụike ahụike nke ọka bali Ọ nwere ike belata ọbara ọbara, mee ka arịa ọbara dị nro, melite ịrụ ọrụ obi, gbochie kansa ma gbochie oke ibu mgbe ị drinkingụchara mmanya.
Nke gara aga: Obere yogot akụrụngwa
Osote: Ngwunye azu